Qalabayn badan oo ka kooban 21,5-inji iMac lama heli karo | Waxaan ka socdaa mac
Qalabayn badan oo 21,5-inji iMac ah ayaan laga heli karin Apple Store
Faahfaahin kasta, si kasta oo ay u muuqato mid aan qiimo lahayn waxay u muuqan kartaa, waxay muhiim u noqon kartaa deegaanka Apple. Waxaan hadda ogaanay haddii aad gasho Apple Store oo aad rabto inaad iibsato a 21,5-inji iMac, waxaa jira goobo badan oo aan la heli karin. Taasina caadi maaha.
Waxa caadiga ah waa inaad had iyo jeer aragto waqtiga dhalmada, ka gaaban ama ka dheer iyadoo kuxiran kaydka. Waxa aan soo noqnoqon ayaa ah in qalab aan cusub ahayn, uu u muuqdo iyada oo aan la helin. Qaylodhaan ku saabsan suurtogalnimada bilaabida a cusub iMac Way toogteen.
Maanta waxaan ogaanay in haddii aad rabto inaad ka iibsato iMac cusub Apple Store, waxaa laga yaabaa inaad dhibaatooyin leedahay. Dhowr qaabeyn oo kala duwan oo ah 4-inch 21,5K iMac, Ma yihiin kuwa la soo saari karo dalabkaaga bogga Apple. Tani caadi uma ahan aalad aan cusbayn. Taariikhda bixinta la qiyaasay ayaa had iyo jeer soo muuqata.
In kasta oo ay jiraan warar xan ah oo sheegaya in iMac cusub la sii deyn doono sannadkan, haddana helitaanka la'aanta hadda ee xulashooyinka keydka ee dhamaadka sare waxaa laga yaabaa in ay ugu wacan tahay gabaabsi ka kooban qeybaha halkii laga sheegi lahaa in dhowaan la soo saari doono qaab cusub.
Waxaa laga yaabaa in moodooyinka leh kaydinta SSD ay yihiin kuwa ugu badan ee la dalbado, oo sii jira haysa qaabab qaas ah, laakiin caadi maahan.
Waqtiga la bilaabayo dib-u-habeynta iMac weli ma cadda, sidaa darteed waa inaan feejignaan saarnaa si aan u ogaano haddii ay mar kale diyaar yihiin Haddii kale, bilaabid iMac cusub waxaa laga yaabaa inuu ku yaal dhinaca geeska. Waa dhif iyo naadir in qaabeynta iMac aan loo heli karin iibsasho.
Waa moodello suuqa yaallay muddo dheer, iyo had iyo jeer waa la soo saaray keyd ah Iyo in ka badan oo ah 21,5-inji iMac, inta ugu badan ee la awoodi karo oo leh heer wanaagsan oo aqbalaad suuqa ah. Waan feejignaan doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Qalabayn badan oo 21,5-inji iMac ah ayaan laga heli karin Apple Store
Apple Pay waxay imaaneysaa Israel
Apple wuxuu sii daayay Safari Falanqaynta Teknolojiyada 121